Yonwaba kwiLake Macquarie
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguJudy
Yonwabela indawo epholileyo yokuphumla kufutshane nechibi kwikhaya elisandula ukulungiswa, elilungele ukubaleka ngempelaveki ukusuka eSydney okanye kwiholide yosapho eLake Macquarie. Le ndawo yokuhlala iphangaleleyo inefenitshala entsha kunye namagumbi okulala amane anokwamkela iindwendwe ezi-8-10. Ichibi kukuhamba nje imizuzu emibini.
Ijethi eKilaben Park kufuneka uyindwendwele kwaye kukumgama nje okhawulezayo wemizuzu emi-5 kwaye ibonelela ngemidlalo yasemanzini eyonwabisayo efana nokuhamba ngesikhephe, ukukhwela inqanawa, ukukhwela isikhephe, ukukhwela inqanawa kunye nokuloba. Yonwabela i-BBQ yosapho ngasemanzini apho abantwana banokudlala khona kwibala lokudlala. I-Speers Point Park ikwayindawo entle yokuba abantwana badlale kwaye kukuhamba nje ngokukhawuleza.
Yiya kwisitrato esikufutshane seendawo zokutyela kunye neevenkile eToronto okukuhambo nje lwemizuzu eli-15 kwaye wonwabele uluhlu lwezidlo ezimnandi kunye nokuhamba kakuhle ngasemanzini. Yonke into oyifunayo ifikeleleka lula! Iklabhu yeYacht ilungile kubo nabaphi na abathanda ukuhamba ngesikhephe kwaye inendawo yokutyela emangalisayo enokuthi ibambe imisebenzi ejongene neLake Macquarie.
Ukuphumla kweLake Macquarie kufikeleleka ngokulula ukusuka eCarey Bay, eNewcastle yimizuzu engama-30 kwaye iHunter Valley ikwimizuzu engama-40 ngokuqhuba.
Ngeeholide zesikolo ezizayo, le ndlu engasechibini yindawo entle yokuhlala usapho olukhulu, iintsapho ezimbini okanye iqela elincinci labahlobo.
Sinobuncinci bokulala ubusuku obu-2 ngeeholide zikawonke-wonke e-NSW.
Nceda uqinisekise ukuba zonke iindwendwe (kubandakanywa nabantwana) zigonywe ngokupheleleyo phambi kokuhlala.
Inombolo yomthetho: PID-STRA-4776
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Carey Bay